Feedier: Sehatra fanehoan-kevitra atosiky ny valisoa | Martech Zone
Tsy misy andro iray izay tsy nanaterako latsa-bato, fanadihadiana na fangatahana valiny. Raha tsy tena afa-po aho na sosotra amin'ny marika iray, dia mamafa ilay fangatahana fotsiny aho ary mandroso. Mazava ho azy, isaky ny indray mandeha aho dia mangataka valiny ary nilaza fa hankasitrahana tokoa aho ka hahazo valisoa aho.
Feedier dia sehatra fanehoan-kevitra mamela anao hanangona valiny amin'ny fanomezana valisoa ny mpanjifanao. Mahazo traikefa hafahafa tsy manam-paharoa izy ireo ary mahazo valiny sarobidy izay tadiavinao. Ny sehatra dia nekena ho iray amin'ireo mora ampiasaina indrindra!
Feedier dia sehatra iray feno fonosana ary ahitana:
Modely sy Famoronana Bot - Ampiasao ny modely efa voafaritra na ny botantsika famoronana mba hiomanana ao anatin'ny roa minitra, tsy misy olana. Ataovy amboarina ny sary famantarana, ny loko lehibe, ny sarony mba hahazoana lalao tonga lafatra amin'ny fikambananao. Ataovy ho anao izany amin'ny alàlan'ny fampidirana sehatra manokana, atiny fampidirana, naoty na fanovana aza ny fiteny. Azonao atao mihitsy aza ny mampihetsika ny mpitatitra anao amin'ny daty voatondro manokana.
Miaraha miasa amin'ny mpanjifanao - Mandefasa mailaka namboarina amin'ny lisitrao manokana, mandefasa lahatsoratra namboarina ho an'ny laharan-telefaona, asio widget tsara tarehy ao amin'ny tranokalanao na web app anao, na mamorona PDF azo pirinty azonao alefa miaraka amin'ireo vokatrao hanangonana valiny.
Mamorona karazana fanontaniana 5 misy dikany - Ny Feedier dia manohana lahatsoratra fohy, NPS score®, slider, select ary lava karazana fanontaniana malefaka. Azonao atao ny mampiseho ny fanontaniana mifandraika amin'ireo mpampiasa marina arakaraka ny fahafaham-po ananany, na mamorona onjan'ny fanontaniana be dia be miorina amin'ny valintenin'ny mpampiasa teo aloha sy ny fepetra voafaritra nofaritanao. Misy endrika kanto mahafinaritra mba hamoronana traikefa tsara indrindra mifangaro.
Valio ny mpampiasa anao - Omeo ny tapakila sy tapakila handrisihana ny fividianana ny ho avy nefa mifehy ny mety ho fandresena. Alefaso ireo rakitra manokana toy ny atiny manokana ho an'ny mpampiasa anao miaraka amin'ny mailaka valisoa azony. Na lakile fanalahidy io, fanasana manokana na karazana hafatra manokana, Feedier dia handefa azy ho anao. Azonao atao ihany koa ny manome vola tena izy amin'ny alàlan'ny Paypal avy amin'i Feedier miaraka amin'ny fetra fanaparitahana sy ny probabilité voafaritra.
Alao sy angony ny hevitry ny mpampiasa sy ny mailaka - Asehoy ny bokotra naoty kintana 5 raha tsy ho an'ireo mpampiasa afa-po sy miasa amin'ny sehatra rehetra toa an'i Amazon. Asehoy ny bokotra manaraka amin'ny tambajotra sosialy tianao amin'ny faran'ny traikefa fanehoan-kevitra. Makà fijoroana vavolombelona vaovao amin'ny alàlan'ny fitadiavana ireo mpampiasa faly ary angataho izy ireo hamela fijoroana ho vavolombelona feno miaraka amin'ny mailaka ataon'izy ireo. Ampitomboy ny lisitry ny mailakao satria ilaina ny mailaka hahazoana ny valisoa.
Mitondrà fanamarihana manokana - Feedier dia mamela anao hifandray amin'ireo mpanjifanao amin'ny alàlan'ny mailakao sy ny CRM anao manokana. Ny tatitra feno dia namboarina ho an'ny hevitra rehetra mba hahafahanao mahatakatra ny mpanjifa amin'ny tsindry iray monja. Ny pejy valisoa dia mamela anao hiditra amin'ny lisitry ny valisoa voazara mba hahafahanao mifandray mivantana.
Fanadihadiana matanjaka - ao anatin'izany ny fitaovana ampiasaina, ny mpitety, ny kisary ora, ny valiny, ny fahafaham-po, ny isan'ny fidirana hevitra, ny fitsidihana, ny firenena tsara indrindra, ny salan'isa ary ny NPS. Ny mpikaroka teny lakile dia manampy anao hizaha ny valinteninao rehetra amin'ny fikarohana teny lakile manokana.
Fitaovana fitantanan-draharaha - Alefaso ny fidirana fanehoan-kevitra mifanaraka amin'ny sivana mavitrika amin'ny .CSV na .JSON amin'ny tsindry iray. Tantano ny ekipanao amin'ny alàlan'ny andraikitra samihafa mba hahazoana mpiara-miasa marobe araka izay ilana fiaraha-miasa. Mahazoa fampandrenesana momba ny zava-mitranga ao amin'ny kaonty Feedier ary koa ny tatitra isan-kerinandro amin'ny antsipirihany.
Ampidiro Feedier - Feedier dia manana JSON REST API voarakitra an-tsoratra hamela ny mpamorona anao hiaraka amin'ireo sehatra sy fitaovanao manokana. Manamboara Zapier ZAPs miaraka amin'ny Feedier dia manosika hanao ny asanao manokana isaky ny mahazo valiny ianao. Mahazoa karama JSON amin'ny URL webhook anao manokana isaky ny misy valiny miaraka amin'ny antsipiriany rehetra.
Ary, ho an'ny Martech Zone mpamaky, ity a Tapakila fihenam-bidy 20% rehefa misoratra anarana amin'ny kaody promo WELCOMEFEEDIER2018.
Midira ho an'ny Feedier
Fampahafantarana: Mampiasa ny rohy fiarahanay ho an'ny Feedier ato amin'ity lahatsoratra ity aho.